Basikety – «Fiba 33» : handray ny fifanintsanana i Madagasikara | NewsMada
Basikety – «Fiba 33» : handray ny fifanintsanana i Madagasikara
Hampiantrano fifaninanana iraisam-pirenena indray ny federasiona malagasin’ny basikety (FMBB). Fantatra fa hatao eto Madagasikara ny fifanintsanana ho an’ny basikety lalaovina olona telo (Fiba 33).
Sambany handray ny fifanintsanana isam-bondrona, hiatrehana ny ho tompondakan’i Afrika, eo amin’ny basikety lalaovina olona telo (Fiba 33) i Madagasikara. Hotanterahina, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ny 7 sy ny 8 aprily ho avy izao, izany. Firenena 11 eo amin’ny lehilahy ary 9 kosa eo amin’ny vehivavy no hiady ny lohany. Nambaran’ny filohan’ny federasiona, Ramaroson Jean Michel, tamin’ny mpanao gazety, omaly tetsy amin’ny Hotel Colbert Antaninarenina fa ny zava-bitan’ny lehilahy, tany Togo tamin’ny taon-dasa, ny nahazoana nampiantrano izao lalao izao.
Hiady laharana amin’i Madagasikara, eo amin’ny lehilahy, i Côte d’Ivoire, izay nandresy ny Malagasy teo amin’ny manasa-dalana ary koa i Egypta, lavon’i Madagasikara, teo amin’ny fiadian-toerana. Eo koa i Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Gabon, Gambia, Ghana, Ginea, Mali.
Amin’ity kosa vao mba hifaninana amin’ity (Fiba 33) ity ny ekipam-pirenena vehivavy, izay hifanintsana amin’i Bénin, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Egypta, Gabon, Gambia, Ghana, Ginea. Hiatrika ny dingana famaranana, hatao any Togo, ny volana mey na jona, ireo ekipa 6 voalohany eo amin’ireo sokajy roa ireo.
Ankoatra an’i Madagasikara, handray ny fifanintsanana koa i Nizeria, tompondakan’i Afrika 2017.
Mandra-piandry izany, hanomboka anio asabotsy ny fifanintsanana isam-paritra, eo amin’ny fiadiana ny amboaran’ny filoham-pirenena, ho an’ny basikety lalaovina olona dimy. Hisantatra izany, ny faritra avaratra, misy an’i Diana, Sofia, Sava, Boeny, Betsiboka.